Boosaaso: Ciidamada oo xiray nin la sheegay inuu ka danbeeyey qaraxii Gaalkacayo [Dhegeyso] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Boosaaso: Ciidamada oo xiray nin la sheegay inuu ka danbeeyey qaraxii Gaalkacayo [Dhegeyso]
Boosaaso: Ciidamada oo xiray nin la sheegay inuu ka danbeeyey qaraxii Gaalkacayo [Dhegeyso]
Posted: Moha Salat - June 4, 2012
Laamaha ammaanka ee gobolka Mudug ayaa gacanta kusoo dhigay nin la sheegay inuu ku jirey labo nin oo midkood ay ciidamadu toogteen midna uu baxsaday kuwaasoo ka danbeeyey qarax khasaare xooggan geystey oo dhowr beri kahor magaalada Gaalkacayo ka dhacay.
Ninkan oo xiligii uu falkaasi dhacayey baxsaday kadib markii uu si adag ula dagaalamay ciidamo Boolis ah oo doonayey inay qabtaan ayaa xariggiisa waxaa Saxaafadda u xaqiijiyey wasiirka amniga ee Puntland.
Col. Khaliif Ciise Mudan oo shir saxaafadeed maanta magaalada Boosaaso ku qabtay ayaa sheegay in ninkaas ay cidamadu soo xireen isagoo dhaawac ah, xiliganna uu ku jiro xabsiga weyn ee magaalada Gaalkacayo.
Wasiirka amniga ayaa dhinaca kale sheegay in magaalada Boosaaso lagu xiray nin kale oo isagana uu sheegay inu ahaa maskaxdi ka danbeysey qaraxaas kaasoo ka soo jeeda gobolada Shabeelooyinka.
Dhegeyso Codka Khaliif Ciise Mudan
Ugu danbeynti wuuxuu Col.mudan sheegay in raggaas dhowaan maxkamad lasoo taagi doono si loo marsiiyo waxa uu sharcigu ka qabo denbiyada ay geysteen waa sida uu hadalka u dhigaye.
Qaraxii ka dhacay magaalada Gaalkacayo maalintii khamiista ahayd ee lasoo dhaafay waxaa ku geeriyoodey 5-qof iyadoo in ka badan 15-qof oo kale oo mas’uuliyiin dowladda ka tirsani ay ku jiraanna uu dhaawac kasoo gaarey.